Notsapainay ny fakantsary tena tsara an'ny Nexus 5X | Androidsis
Notsapainay ny fakantsary tena tsara an'ny Nexus 5X
Manuel Ramirez | | Rohy, About us, hevitra
Araka ny nolazaiko teo aloha ao amin'ny Fampidirana Nexus 5X, izay ahafahantsika mahafantatra ny andro hivoahana sy ny vidiny, ny fakantsary efa nisy ilay mahery fo lehibe ny hetsika nihaonan'ny mpanao gazety tao Madrid.
Manaraka izany dia zarinay ny sary rehetra izay azonay natao tamin'ny fakantsary Nexus 5X hahafahana manamarina raha mendrika ny anao ireo € 479 amin'ny kinova 16GB. Miresaka terminal iray isika izay amin'ny vidiny fanombohana dia tsy mahatratra € 500, toa ny LG G4 mihitsy no niaraka tamin'ireo € 649, ka raha miandry fitaovana Nexus ianao haka ny sary tsara indrindra avy amin'ny Android, ny Nexus 5X no tsara indrindra azonao amin'ny vidiny.
1 Fakan-tsary tena tsara
2 Fanamarinana ny marina momba ny Android
Fakan-tsary tena tsara
Ny fakantsary Nexus 5X no singa miaraka amin'ilay efa nilalao indrindra rehefa nanana ny fahafahany nihazona ity fitaovana Nexus vaovao ity izahay. Ny ankamaroan'ireo nanatrika dia nandany ny fotoanany tamin'ny fakàna sary ny zava-drehetra teo akaiky teo mba hijerena ny toerana misy raha toa ka tena nisy ireo minitra nandokafan-tena ireo hatsaran-tarehin'ny solomaso. Ary eny, izany tokoa.
Tsy afaka nanakaiky kokoa ny sarin'ireo sary izahay, saingy amin'ny fotoana anehoako anao dia azonao jerena mivantana ny fomba ny fitsaboana amin'ny sary dia an-kolaka ary mampiavaka azy amin'ny Nexus hafa hita hatramin'izao, toy ny Nexus 6 izay natolotry Motorola tamin'ny taon-dasa, saingy tsy nahatratra ny andrasana, ankoatry ny fananana vidiny avo kokoa noho ity fanontana fahatelo ity izay avy amin'ny LG ho an'io haben'ny efijery io.
Efa nanana ny fotoana tsy ela lasa izay izahay mba hampitahana ny kalitaon'ny sary an'ny Nexus 6P sy ny iPhone 6 ato amin'ity fidirana ity. ny fampitahana izay namela mpandresy mazava tahaka ny Nexus 6P izay manana solomaso mitovy amin'ity Nexus 5X mahafinaritra ity. Toy ny Galaxy S6, ny fakan-tsariny dia mametraka ny ambiny amin'ireo singa amin'ny lafiny faharoa ary zara raha misy afaka mandray an-tsaina izany noho ny fahaizan'ny sary ary tsy mitsahatra ny midera isika. Heveriko fa izany no marika ho eo am-pelatananao ary handeha hampiasa io maody mahazatra io izay mitifitra sary toa ny basy submachine.
Fanamarinana ny marina momba ny Android
Efa misy fitaovana Android maromaro nanome a dingana lehibe raha resaka sary no resahina. Ireo LG G4, Nexus 5X / 6P, Xperia Z5 ary ny Galaxy S6 / edge ary Note 5 no fanamafisana lehibe azon'izy ireo hanehoana fa efa mahatratra ny asan'ilay nanjaka tamin'ity sehatra ity izay tsy iza fa ny iPhone an'ny Apple.
Izy io dia iray amin'ireo saha misy ny Android efa resy isan-taona, noho izany ity Nexus 5X ity dia manamarina izay efa hita tamin'ny terminal hafa fa efa nanomboka nipoitra tamin'ny taon-dasa tamin'ny Galaxy Note 4.
Fakan-tsary miaraka amin'ny sisa amin'ireo singa sy Android Marshmallow izay tohizo ny fahatsapana tsara izay mamela miaraka amina rindrambaiko mihetsika tonga lafatra ary ankehitriny dia mahagaga ny mandalo azy handefa izay fampiharana, lalao video na tambajotra sosialy.
Dingana lehibe raisina amin'ny ankapobeny, ary izany hitondra antsika any amin'ny lalana hafa amin'ny taona ho avy amin'ity kinova Android vaovao ity izay haseho ao amin'ny Google I / O 2016, izay efa andrasantsika hatrizay, satria i Marshmallow dia nanome ampy hanatsarana izay hita ao amin'ny Lollipop miaraka amin'ireo fanovana rehetra ireo amin'ny estetika sy ny fiasa. Faharetana kely ary ho hitantsika ny alehantsika rehefa tonga any an-tampony izay sary tsara avy amin'ny finday Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Rohy » Notsapainay ny fakantsary tena tsara an'ny Nexus 5X
Natambatr'i Microsoft ho lasa Outlook nohavaozina tanteraka ireo fampiharana Acompli sy Sunrise
Nexus 5X, misy any Espana manomboka amin'ny 9 Novambra